ပလက်ဝတိုက်ပွဲအတွင်းဖမ်းမိတဲ့ သုံ့ပန်းကိစ္စ တပ်မတော်ငြင်းဆို
ပလက်ဝတိုက်ပွဲအတွင်းဖမ်းမိတဲ့ သုံ့ပန်းကိစ္စ တပ်မတော...
21 พ.ย. 2562 - 13:51 น.
နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့က ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ်အတွင်းမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲအတွင်း ဗိုလ်တစ်ဦး၊ အရာခံဗိုလ်တစ်ဦး အပါအဝင် တပ်မတော်သား ၁၃ ဦးကို သုံ့ပန်းအဖြစ် ဖမ်းမိပြီး လက်နက် ၁၄ လက်နဲ့ အလောင်းတစ်ချို့လည်း သိမ်းမိတယ်လို့ AA ရက္ခိုင့်တပ်ဘက်က သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ဒီထုတ်ပြန်ချက်အပေါ် အနောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် ပြောခွင့်ရသူ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဝင်းဇော်ဦးက ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
ပလက်ဝနောက်ခြမ်းဆိုတာ ၂၀၁၇ တုန်းက တိုက်ပွဲတွေ အကြီးအကျယ်ဖြစ်သွားတဲ့ သတင်းကို ပြန်တင်ထားတာ လို့ ဗိုလ်မှူးကြီး ဝင်းဇော်ဦးက တုန့်ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။
ဗိုလ်မှူးကြီးဝင်းဇော်ဦးက " မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ အဲဒါ ဟိုးအရင်တုန်းက ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကို ပြန်တင်ထားတာ။ မနေ့က မြေပုံမြို့နယ် တစ်ခုတည်းမှာပဲ ဖြစ်တယ်။ ကျန်တာ ဘယ်နေရာမှာမှ မဖြစ်ဘူး၊ ကျွန်တော်တို့ အုပ်ချုပ်မှု ယာဉ်တန်းတစ်ခုက ယောချောင်းဘက်ကို အသွား အင်ကြင်းဆိုတဲ့ ရွာနားမှာ ဆွဲမိုင်းနှစ်လုံး အဆွဲခံရတာပေါ့ " လို့ဆိုပါတယ်။
ဒီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုမှာ ကားတွေပဲ ထိခိုက်ခဲ့ပြီး လူတော့ အထိအခိုက်မရှိဘူးလို့ ဗိုလ်မှူးကြီးဝင်းဇော်ဦးက ဆိုပါတယ်။
အေအေဘက်ကတော့ ဒီဖမ်းမိတဲ့ သုံ့ပန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသေးစိပ် သတင်းတွေကို ထပ်မံတင်ပြပေး သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကျောက်တော်မှာ စစ်ယာဉ်တန်း မိုင်းခွဲခံရလို့ တပ်ရင်းမှူးကျဆုံး
နိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက်မနက် ၅နာရီခန့် အချိန်ကလည်း ဘူးသီးတောင်မြို့ပေါ် ဗျူဟာကနေ အမြောက်ကြီးတွေနဲ့ ရသေ့တောင် မြို့နယ်မှာ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေတဲ့ လိုင်ဂွင်ကြီးချောင်းဘက်ကို ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။
တိုက်ပွဲအတွင်း အကျဆုံးတချို့ရှိပေမယ့် သုံ့ပန်းကိစ္စကတော့ မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ပြောဆိုပါတယ်။
တိုက်ပွဲတွေဟာ ပြင်းထန်ပြီး ကျယ်ပြန့်လာတဲ့အတွက်ကြောင့် ထွက်ပြေးရသူ စစ်ရှောင် အရေအတွက်ကလည်း လက်ရှိမှာ ရှစ်သောင်းကျော်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စု အစည်းအရုံးက တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောခဲ့ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ပလက်ဝတိုက်ပွဲအတွင်းဖမ်းမိတဲ့ သုံ့ပန်းကိစ္စ တပ်မတော်ငြင်းဆို